Faka i-greenhouse ekhaya futhi ubusebenzise kakhulu ubusika | Bezzia
UMaria vazquez | 13/09/2021 20:00 | Umhlobiso
Ungathanda ube nengadi encane? Ukwazi ukutshala ukudla kwakho ngembewu? Ngabe usajabulela ingadi ebusika futhi? Ukushisa kwendlu ekhaya yisixazululo ukuvikela izitshalo nezimbali zakho ezintekenteke kakhulu emakhazeni amakhulu, emvuleni noma eqhweni ebusika.
Manje buyeza lobo busika Faka i-greenhouse ekhaya! Izokuvumela ukuthi uqhubeke nokujabulela ukulima nokulima ingadi ngalesi sikhathi sonyaka, kanye nokukunikeza indawo yokuphumula. Ukubheja ngezinhlobo ezikhangayo nezinokuqina njengezindawo zokugcina ingilazi noma udale i-greenhouse yakho ngezinto ezishibhile.
1 Izinzuzo zokuba ne-greenhouse ekhaya
2 Izinhlobo zokugcina izithombo
2.3 Encane ngosayizi
Izinzuzo zokuba ne-greenhouse ekhaya
Kunezinzuzo eziningi zokufaka i-greenhouse ekhaya, kepha indawo esihlala kuyo iyabanda. Ake sqhubeka nokusebenza engadini yethu noma ngezitshalo zethu ebusika, ukuvikela lokhu emakhazeni. Lokho mhlawumbe kuyinzuzo enkulu kepha hhayi kuphela.
Kuyinto ekhangayo futhi ehlobisa kakhulu. Into engenza ingadi yethu ikhange ngokwengeziwe.
Yindawo ekahle lapho vikela izitshalo ezibucayi kakhulu ebusika ukuqhubeka nokuzijabulisa ngaphandle entwasahlobo.
Kuyasiza kakhulu lapho sitshala imifino yethu ngesikhathi esibandayo sonyaka. Kusivumela ukwandisa umkhiqizo futhi kuqinisekisa impumelelo cuttings kanye izithombo.
Isinikeza isikhala soku zikhule izinhlobo ezivela ezimweni ezifudumele futhi ezishisayo
Kungaba futhi yi- indawo ephelele yokuba ngaphandle kusuka endlini ezingeni lokushisa elihle ngezikhathi ezibandayo zonyaka. Uzodinga kuphela ukubeka itafula eliseceleni elincane kanye nesihlalo sobukhosi kuso.
Izinhlobo zokugcina izithombo
Umsebenzi wegreenhouse ngu dala indawo elawulwayo (i-microclimate) ukuthi igcina izimo ezifanele zokushisa, umswakama nokukhanya ukuze izitshalo nezimbali zikhule ziphilile futhi zivikeleke esimweni sezulu esibi. Kodwa-ke, akuzona zonke izindlu zokugcina izithombo ezisemakethe ezifeza lo msebenzi ngendlela efanayo, ngakho-ke kubalulekile ukuzibuza imibuzo embalwa ngaphambi kokwethula ukuyithenga.
Uzoyisebenzisela ini i-greenhouse? Lona ngumbuzo wokuqala okufanele uzibuze wona uma ngabe usuthathe isinqumo sokubeka indawo yokugcina izithombo engadini. Akuzona zonke izindlu zokugcina izithombo ezinikeza indawo emnandi yokusetshenziswa njengendawo yokuphumula. Akuzona zonke ezenziwe ngezinto ezifanayo, ezithonya ikhwalithi yazo futhi, nakanjani, isabelomali esidingekayo ukuthola eyodwa.
Kunezinhlobo eziningi zokubamba ukushisa, kuncike kokuqukethwe, ubukhulu, ukwakheka ... Namuhla inhloso yethu ukukubonisa ama-brushstrokes amancane ezinye zazo, ezithandwa kakhulu, ukuze okungenani ucace lapho ungaqala khona ukubheka.
Izindlu zokugcina ingilazi zinobuhle obucophelelayo futhi nikeza ukwahlukanisa okuhle kakhulu. Futhi abiza kakhulu. Ingilazi inikeza ukukhanya okudingekayo ekukhuleni kwezitshalo kanye nombono ohlanzekile ngokuphelele kusuka ngaphakathi kuye ngaphandle nangaphandle kwalokho.
Ziyizinqumo ezingcono kakhulu zabalimi abadinga kakhulu, kodwa futhi efanelekile kakhulu ekwakheni izindawo zokuphumula zangaphandle. Uma kuziwa ekwakheni isandiso esimboziwe sendlu engadini, yizona ezifunwa kakhulu. Ukuqina kakhulu kuyinketho esimeme kakhulu kunaleyo eyenziwe ngezinto zepulasitiki.
Kunezinhlobonhlobo eziningi zemiklamo phakathi kwezindawo zokugcina izithombo ezinamakhava epulasitiki. Izinto zepuleti okufana ne-polycarbonate noma i-polymethacrylate, banikeza izindlu zokugcina izithombo ngokuqina okungenakufinyelelwa ngezinto zefilimu noma zefilimu ezifana ne-polyethylene (PE) noma i-polyvinyl chloride (i-PVC).
Azihehi njengezingilazi yize, lezo ezenziwe ngamapuleti azikude kakhulu nalezi futhi zishibhile. Ngaphezu kwalokho, ziyizinto okusebenza kalula ngazo, ngakho-ke ukuba wumuntu osebenza ngesandla kancane ungazakhela i-greenhouse yakho kusetshenziswa amapuleti ezinkuni kanye nama-polycarbonate. Kuwebhu, uzothola konke kusuka ezinhlelweni kuya kokufundiswayo ukwazi ukuthi ungakwenza kanjani.
Kokubili kokukodwa nakwezinye kungenzeka ukuthola, ngaphezu kwalokho, zokugcina izithombo ezincane njengalezo eziboniswe ezithombeni. Uma ufuna kuphela isikhala sokuvikela izitshalo zakho ebusika, ukuze ukwazi ukwakha umbhede omncane wembewu noma utshale imifino embalwa, lesi yisixazululo esifanelekile. Ngokwami, ngiyazithanda izinketho ezinamathiselwe ku-facade, akunjalo?
Sesha eyodwa indawo enhle yokushisa, Ngaphandle kwezithunzi ezinkulu zezihlahla noma izakhiwo ukuze lithole okungenani amahora angama-6 elanga ngosuku, linganisa isikhala kahle bese ufaka i-greenhouse ekhaya- Uzothola okuningi kukho.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Umhlobiso » Faka i-greenhouse ekhaya futhi ubusebenzise kakhulu ubusika